Beesha caalamka oo arimahii Somaliya ku soo koobtay sedax qodob.
Posted by admin on March 27 2011 10:48:51
Axad 27,Maarso 2011(hiranstate.com)-Beesha caalamka oo ah mid ka mid ah qabiilada Somaliyeed ee 20kii sano ee ugu danbeysa arimaha Somaliya wax ka maamulayey ayaa siyaasadii Somaliya ku soo koobay 3 qodob oo muhiim ah warbixin.
Somaliya:(hiranstate.com)- Isbedelada siyaasadeed ee dalka ka curtay waxey u muuqaal ek yahiin xiligii ay Somaliya xornimada qaatatay oo ninkasta iyo gobol kasta uu ku jiray loolan siyaasadeed. siyaasadaha hada ka curtay dalka Somaliya wey ka duwan yahiin kuwii aanu 20kii sano ee ina dhaaftay arki jiray sababo badan awadood, waxaana laga yaabaa in Somaliya sanadkani aynu ku jirto noqdo wadan ay ka curato nabad galyo iyo dowlad caadil ah oo shacabka dhibta heysta ka bixisa.
Markaad aragto awooda cusub iyo siyaasadaha baarlamaanka Somaliya uu wado oo uu garwadeenka ka yahay gudoomiyaha baarlamaanka Somaliya oo garab ka helaya mudanayaasha baarlamaanka,qaar ka mid ah golaha wasiirada xukumada Farmaajo oo iyagu arintaan ugu dheeraya mudanayaasha si weyna ugu soo horjeeda dhaq dhaqaaqa madaxweynahooda. markaad aragto dhibaatada ku habsatay wadamadii colaada ka hurin jiray dalka Somaliya qaarkood sida Libiya, Yemen iyo waxiil a mid ah. dalka Somaliya waxaa ka muuqda ifafaalo wacan oo horumarkiisa leh.
Marka nuxurka iyo siyaasada rasmiga ah dib loogu laabto beesha caalamka iyo wadamada arimaha Somaliya daneeya waxey howshooda 20 sano kedib hada ku soo koobeen sedax qodob oo kala ah.
1- In dalka Somaliya iyo shacabkoodu ka baxo kumeel gaar oo sanadkani waxii ka danbeeya ay Somaliya yeelato dowlad rasmi ah oo aan mar danbe loogu yeereyn TFG.
2- In dalka Somaliya laga hirgaliyo dowlad goboleedyo awood leh halka dowlada dhexe ay noqon doonto mid aan tabar badneyn.
3- In aysan doorashada gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha Somaliya aysan ka daba marin waqtigii loogu talo galay oo ah bisha 8aad ka hor inuu wadanka Somaliya leeyahay madaxweyne cusub oo aan aheyn midka hada talada haya, waayo hadii uuba joogayo midka hada talada haya maba loo baahdeen in wadanka ay ka dhacdo doorasho oo waqtiga ayaa loo kordhin lahaa, sidaasi daraadeed aduunyadu sedax daas qodob ayaa miiska u saaran iyadoo mar walba ixtiraameyso go,aanka baarlamaanka Somaliya.
Shacabka Somaliyeed oo ay la hareen colaado, abaaro iyo waliba Sunta kiimikada ah ee Bada Soamliya ay ku shubaan wadamada horey umaray taasi oo ay cuduro ka soo gaartay caruurta iyo dumarka Somaliyeed ayaa laga yaaba in uu yeesho dowlad cadaalad ah oo dadka u kala xaqsoorta kuna ixtiraamta jiritaankooda Somalinimo, taasi oo lagu wado iney dalka ka curato bisha 8aad ee inagu soo aadan.